Wararka Maanta: Khamiis, Apr 11, 2013-Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada oo ka Da’ay Kismaayo [Sawirro]
Roobabkan oo ah kuwa xilliga gu’ga ayaa bilowday xalay saqdii dhexe waxayna socdeen ilaa saaka aroortii, waxaana roobabkani ay biyo dhigeen qaar kamid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Kismaaayo ayaa si diiran usoo dhaweeyay roobabka ka curtay magaalada xilli cimilada magaalada Kismaayo ay maalmihii u danbeeyay ahayd mid aad u kulul.
Roobabkan ayaa sidoo kale saameyn ku yeesheen isticmaalka qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo, waxaana ay gabi ahaanba jareen wadada dheer ee laamiga ah ee marta agagaarka guriga gobolka ee magaalada Kismaayo.
Gadiidka ayaa isticmaalaya wadooyin wareeg ah oo dhexmara xaafadaha magaalada, maadaama ay biyaha roobka ay dhex caygaagaan wadada dheer ee laamiga ah taasoo ay isticmaali jireen gaadiid isaga kala goosha xaafadaha magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale roobabkan ayaa saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ah eek u dhaqan magaalada Kismaayo, kuwaasoo markii horeba ku noolaa guryo ka sameysan cooshado, kuwaasoo aan awood u lahayn in ay iska difaacaan dhibicda roobka.
Roobabkani ka curtay Kismaayo ayaa kusoo beegmaya iyadoo lagu gudo jiro bishii 1-aad ee xilliga Gu’ga oo ah xilli roobeed ay siweyn uga faa’iideystaan beeraleeyda Soomaaliyeed ee iyagu tabcada dalagyada kala duwan.